UEFA Champions League na Europa Njikọ amụma - amụma website - jluis37.com
Egwuregwu Europa na Njikọ Njikọ bụ abụọn’ime asọmpi asọmpi kachasị akụkọ ihe only eme na akụkọ egwuregwu. Website t njedebe nke ogologo oge maka isi klọb soccer football nke Europe, ihe omume a kachasị elu pụtara ihe niile maka ndị asọmpi ahụ. Ihe niile ị chọrọ ịkụ nzọ bọọlụ gị dị na Stake.com/sport, ma ghara ile anya!
Na Njikọ Njikọ, ọkwa kachasị elu nke European soccer, anyị nwere ìgwè abụọ si England na-akwado un maka ịdị elu. London dị na London ga-achọ ịgbakwunye na akụkọ ntolite klọb buru ibu, ebe Manchester City na-ezube imebi akụkọ underdog. Otu abụọ that a na-egwu egwu na nke ikpeazụ, ọ ga-abụ ihe nkiri ilere anya.
Na Europa League, Manchester United na Villarreal ga-anọ na njedebe na-achọ ị nweta akara CL. Otun’ime ndị otu that a ga-enwe ọ delightụ inwe mpaghara otu egwuregwu na-akpaghị aka na-agan’afọ ọzọ,n’agbanyeghị na ọkwa ụlọ ha ga-ekwe nkwa ya tupu oge eruo.
Ka anyị banye n’ime egwuregwu abụọ a ga-aga, yana ihe nwere ike ime.
Njikọ Champions League (Manchester City na Chelsea)
N’ikpeazụ, CL ga-eme na Porto, Portugal. Ya na ndi otu egwu Premier League n’acho ime ka obodo ha di elu. Manchester City banyere asọmpi a dị ka ọkacha mmasị kachasị, ebe ọ meriri Premier League na ile anya n’ụdị ọnwa ole na ole gara aga. Onye njikwa ha bụ Pep Guardiola ga-ele anya have been ọrụ kpakpando, un t ụzọ anọ ga-ekpuchi. Na-agbachitere, na-ebu iwe, na-akpọ ya. Ndị otu that a tozuru ma ọ naghị ele ha anya ihere maka nnukwu ohere dị otu a. N’aka nke ọzọ, Chelsea enweela afọ siri ike. Ha jisiri ike gụchaan’elu anọ maka Premier League d e ndị Blues adabere d e nchebe siri ike yana nnukwu mgbakwunye ọgụ ọgụ na njikwa Thomas Tuchel. Egwuregwu a kwesịrị ịbụ nke nwere obere mmejọ ole na ole, yana ihe niile ị ga-egwu. Anyị kwenyere na Pep ga-egwu egwuregwu karịa Tuchel na nke a, mana na-atụ anya otu ihe siri ike na City na-ede ya.
Njikọ Njikọ Europa (Manchester United na Villarreal)
Dị ka ndị ha na ha na-eme egwuregwun’obodo, Manchester United nọ na-agba egbe dị egwun’oge egwuregwu Premier League niile. Formdị that a ebufela na egwuregwu European, ebe ọ bụ na ha emebiwo ma na-agbanye mpi han’ụzọ ọ bụla o kwere mee. Na-eduga na nke a, Red Devils emeela mbibi maka onye ọ bụla na-emegide ha n’ụzọ ha, nwere ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ na egwuregwu ọ bụla. Nke a ga – abụrụ Villarreal nsogbu, ebe ọ bụ na ha adịghị ọcha d e ịgbachitere onwe ha. United ga-enweta ihe niile t even egwuregwu a, ebe ọnọdụ ha na Champions League na-esote emechilarị. Otu Villarreal nke Spain kwesịrị itinye aka na nchekwa, ma mepụta ohere na mwakpo ọ bụla dị mkpa. Unai Emery ga-emerikwa ma ọ bụrụ na ha ga-eme egwuregwu bọọlụ Europe na-esote oge, ike na-akpali akpali n’ezie.
Maka CL nke Ikpeazụ, ịkwado City bụ nnukwu nhọrọ. Kwere na Pep na otu egwuregwu nke ha gosipụtara n’afọ niile, nke a ga-abụkwara ha ihe egwuregwu. Manchester City iji merie 2-1 / BTTS bụ ezigbo nzọ, mana City ga-ebuli iko ahụ mgbe ekwuru ma mee ya.
Njikọ Njikọ bụ ihe dị mfe, United ga-enwe ụbọchị ubi na ndị otu Spanish. Person United iji merie 3-1 ma ọ bụ 3-0 bụ ezigbo nzọ, anyị chere d e ha ga-emeri nke ọma.
Chọrọ ịkụ nzọ t egwuregwu ndị a dị elu? Nwere ike ime nke a ugbu a na Stake ma ị chere d e ọ bụ Manchester City, Chelsea, Manchester United ma ọ bụ Villareal na-ebuli decorationsn’izu a, ị ga-enwe nnukwu nsogbu na Stake!
Ọzọkwa, ọ bụrụ t ị tinye nzọ $ 5 t ahịa 1 × 2 t ndị otu gị buru ụzọ, mana anaghị ahapụ mgbe nkeji 90 gachara, Stake ga-akwụghachi nzọ gị dịka akụkụ nke nkwalite ọhụụ ọhụrụ ha dị egwu!